Wararkii Ugu Dambeeyay Doorashada Somaliya Iyo Shirka DhuusaMareeb
February 6, 2021 Farah Abdikadir Mohamed 2
1-Kulamo gaar-gaar ah ayaa kasocda DhuusaMareeb, dhinacba dhinaciisa ayuu la leeyahay, waxay maraysaa halka loo yaqaano Yeysan ku eersan adiga.
2- Arrinta gobalka Gedo waa caqabad ilaa 5 xal loo keenay midna qaadan weysay, una muuqata barako maleh! Rajadeeduna sii yaraanayso “Haddii aysan qolo 100% tanaasulin, mana muuqato”. Xanaaqii maanta ee JL wali waa halkiisii.
3- Muqdisho Fadhiga baarlamaanka ee wadajirka ah ayaa la diyaarinayaa, Wali guddoonku ma sheegin wax baajin ah, xili maanta aan ogeyn wararka Beesha Caalamka.
4- Madaxweynaha Puntland, cadaadis kale ayaa soo fuulay oo ah in uu saaxiibkiis Axmed Madoobe xal ka keeni waayay, Isimadda PL qaarkood ayaana telfoon kula hadlay “Yeysan na eersan anaga” ayay dhaheen.
5- M/weynaha DFS ayaa kulan khaas ah layeeshay wafdiga Dawladdiisa ee la socda, Xog badan wali kama soo bixin “Masuuliyadda ugu adag ayaa kudhacaysa Natiijo kasta oo shirkan kasoo baxda ah” Hoggaamin ayaa laga sugayaa.
6- Haweenka Soomaaliyeed ee la baxay Lednow, waxay sheegeen in aysan diyaar u aheyn Is afgaran-waa “Garoonka lagama bixi karro”.
Waxaan idin weydiiyey, labadii nin ee LAANDHEERAYAASHA ahaa maxaad gadaal ugu kuusteen?! Aad baad iiga qosliDeen. Si kastaba, Madoobe mawqifka uu istaagay gar buu u leeyahay hana ku adkaysto!
dhibatada haysata Madaxweyneha somaliya Maxamed Abdullahi farmajo,waxii aad ku heshisan qofka kaga Danbeya aya ka badalaya,waxad ogeyden waxii heshis lala galay qolo kale oo taladu kagodo aya ka babi’inaya, mara wax heshi ah oo soconaya majiran,waxa ficnan lahayd in marka hore qoladas qarsoon heshiska goob joog ka’ahadan ama laftigoda heshiska laga qaybgaliyo.